ကွပ်မျက်ခြင်း ခံရသော ဧလိ၏သားများနှင့် ကယ်တင်ခြင်းခံရသော ရှာမွေလ | The Reprobation of the Sons of Eli, and The Salvation of Samuel | Real Conversion
ကွပ်မျက်ခြင်း ခံရသော ဧလိ၏သားများနှင့်
၂၀၁၂၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၉ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊ သခင်ဘုရားနေ့ မနက်ပိုင်း ဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားသောဒေသနာတော်၊
Lord’s Day Morning, January 29, 2012
“ဧလိ၏သားတို့သည်ထာ၀ရ ဘုရားကို မသိအဓမ္မလူ ဖြစ်ကြ၏ (၁ရာ ၂း၁၂)။
“ရှမွေလသည် ထာ၀ရဘုရားကို မသိသေး၊ ဗျာဒိတ်တော်ကို မခံရသေး။ တတိယ အကြိမ်ထာ၀ရဘုရားက ရှမွေလဟု ခေါ်တော်မူလျှင် ၊ရှမွေလထပြီးလျှင် ဧလိထံသို့သွား၍ ကိုယ်တော်ခေါ်သောကြောင့် အကျွန်ုပ်လာပါသည်ဟု ဆိုသော်၊ထာ၀ရဘုရား သည် ထိုသူငယ်ကို ခေါ်တော်မူကြောင်းကို ဧလိသည် ရိပ်မိလျှင် သင်သွား၍ အိပ် ဦးတော့၊နောက်တဖန်ခေါ်လျှင်၊ အိုထာ၀ရဘုရားအမိန့်ရှိတော်မူပါ။ကိုယ်တော်ကျွန် ကြားပါသည်ဟု လျှောက်ရမည်အကြောင်း ရှမွေလကို မှာထားသည်အတိုင်း ရှာမွေလသွား၍မိမိနေရာ၌ အိပ်လေ၏။ ထာ၀ရဘုရားသည်လည်း ရှေ့နည်းတူလာရပ်လျှက် ရှမွေလ၊ရှမွေလဟုခေါ်တော်မူလျှင် ရှမွေလက အိုထာ၀ရဘုရားအမိန့်ရှိတော်မူပါ၊ကိုယ် တော်ကျွန်ကြားပါသည်ဟု လျှောက်လေသော်၊ (ဓမ္မရာဇဝင်ချုပ် ပထမ ၃း၇-၁၀)။
ဒေသနာတော်ခေါင်းစဉ်က”အပြင်လူနှင့် အသင်းတော်မိသားစုမှ လူကလေး” ဟူ၍ ခေါင်းစဉ်တပ်လိုပါ သည်။ လူငယ်ရှာမွေလသည် အပြင်ဘက်မှ တဲတော်ဝတ်ပြုရာသို့ ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ “အသင်း တော်မိသားစုမှ ကလေး” ဆိုရာတွင်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းဧလိ၏ သားများဖြစ်သော ဟုတ်ပနီနှင့် ဖိုင် ဟတ်တို့ကဲ့သို့ တဲတော်၌ နှစ်ရှည်ကြာနေလာသော လူကလေးများကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ သင်လည်း ခရစ်ယာန်မိသားစု ကလးတော်တော်များများအတွက် စိတ်ကုန်ကောင်းစိတ်ကုန်နိုင်ပေမည်။ သို့သော် အသင်းတော်လူငယ်များ အကြောင်းလေ့လာခဲ့သူ သုတေသီဂျော့ဘာနာက ၈၈%ရာခိုင်နှုန်း သော အသင်းတော်မိသားစုကလေးများဟာ အသက်၂၅နှစ်မတိုင်ခင်အသင်းတော်ကို စွန့်ခွါကြပြီး”ဘယ်တော့ အခါမှ ပြန်မလာကြတော့ပေ” ၁၀ယောက်လျှင်တစ်ယောက်ကသာ မိမိဖါသာ အသက်ရှင်လာခဲ့ပြီး ဘုရားကျောင်းကို ရောက်ရှိလာသည်ဟု မှတ်ချက်ချခဲ့သည်။ ဧလိ၏သားဟုတ်ပနီနှင့် ဖိုင်ဟက်တို့နှစ် ယောက်ကို ဆင်ခြင်တဲ့အခါ “သူတို့သည် ထာ၀ရဘုရားကို မသိကြ” ဟူ၍ကျမ်းဖေါ်ပြချက်ကို ထောက်သော်၊ သုတေသီ၏ ကောက်ချက်မှန်မည်ဟုထင်ပါသည်။ ရှာမွေလကဲ့သို့ အပြင်ဘက်ကနေ ရောက်လာသောသူသည် ကယ်တင်ခြင်းခံရပြီး သစ္စာရှိစွာဖြင့် ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်မြတ်၌ ပါဝင်ဆက်ကပ်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဤဒေသနာတော်သည် “အပြင်လူနှင့်ခရစ် ယာန်မိသားစု ကလေး” တို့ကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့ရန်အတွက် ဟောကြားပါမည်။ အကယ်၍သင်သည် အပြင် ကလာရောက်သောသူဖြစ်ပါက၊ တရားဒေသနာတော်ကို နားထောင်မည် ဖြစ်ပြီးသည်။ အကယ်၍ အသက်တာမပြောင်းလဲသေးသော “အသင်းတော်မိသားစုကလေး” ဖြစ်နေပါကအသင်းတော်၌ကြာမြင့် စွာ ပါဝင်ပါသော်လည်း တရားဒေသနာတော်အားဖြင့် သင့်ကိုသတိပေးနေပါသော်လည်း များသော အားဖြင့် တရားကိုနာ၍ လိုက်လျှောက်မည်မဟုတ်ကြ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင့်အားဘုရားသခင် က လက်မြှောက်အရှုံးပေးနေပြီဖြစ်သည်။
ဤကဲ့သို့ ဧလိ၏သားဟုတ်ပနီနှင့်ဖိုင်ဟတ်တို့၌ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီ၊ သူတို့ဖခင်က သားနှစ်ယောက်အား တဲတော်၌ ယဇ်ပုရောဟိတ် ဖြစ်စေလိုချင်ခဲ့သည်၊ သို့သော်သူတို့နှစ်ယောက်သည် အသက်တာ မပြောင်းလဲခဲ့ကြပါ၊ သမ္မာကျမ်းစာတော်က “ဧလိသားတို့သည် ထာ၀ရဘုရားကို မသိအဓမ္မလူ ဖြစ်ကြ၏”(၁ရာ၂း၁၂)၌ဖော်ပြထားပါသည်။ ဒေါက်တာမက္ကီးက “ဧလိ၏သားတို့သည်အဓမ္မသားများ” ဆိုလိုသည်မှာ မာနနတ်၏ သားများဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ သူတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူး မခံရကြပေ။ ဤနေရာတွင် “သူတို့သည် ယဇ်ပုရောဟိတ် မင်း၏သားများဖြစ်ကြသည်၊ တဲတော်အမှု ထမ်းသူ၏ သားများဖြစ်ကြသည်” (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1982, volume II, p. 127; note on I Samuel 2:12).
အသင်းတော်မိသားစု၌ရှိ လူငယ်များသည် အသက်တာပြောင်းလဲဖို့ လိုနေသည်ကို ဘယ်တော့မှ မမေ့သင့်ပါ၊ ဧလိသားတို့၌ ဘုရားသခင်နှင့် အကျွမ်းဝင်ဖို့ မရှိခဲ့ကြပေ။ ထာ၀ရဘုရားအကြောင်းလေး လေးနက်နက်မတွေးခဲ့ကြပေ။ သမ္မာကျမ်းတော်က “မတရားသောသူသည် မာနထောင် လွားသော ကြောင့် မစဉ်းစားတတ်ပါ။ ဘုရားသခင်မရှိဟုအစဉ် အောက်မေ့တတ်ပါ၏”၊ (ဆာလံ ၁ဝး၄) ၌ဖော်ပြထားပါသည်။ သူအတွေးထဲ၌ ဘုရားသခင်အတွက်နေရာ မပေးခဲ့ချေ! ထိုကဲ့သို့ ဟုတ်ပနီနှင့် ဖိုင်ဟတ်တို့လည်း ဖြစ်ခဲ့ကြပါသည်။ သူတို့သည်ထာ၀ရဘုရားကို မသိကြခဲ့ကြပေ။ ဘုရားအကြောင်း စဉ်းစားတွေး ခေါ်ဖို့စိတ်မဝင်စားကြချေ! မိမိတို့ အတွေးထဲ၌ ဘုရားသခင်အဖို့ နေရာမပေးကြပေ။ သူတို့သည်တဲ တော်၌ အစဉ်အမြဲ ရှိနေခဲ့ကြသည်။ သူတို့ဖခင်သည် ထာ၀ရဘုရားကို သိရှိခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ သို့တိုင်အေင် သူ၏သားနှစ်ယောက်သည် ပျောက်သောသား ဖြစ်နေခဲ့ကြသည်။ ကယ်တင် ခြင်းမရရှိသောသူများဖြစ်ကြသည်။ “အဓမ္မ၏သားဖြစ်ကြသည်ff၊ ဘုရားကိုမသိကြပေ” အသွေးအသား ဇာတိလူ သားသည် မိမိတို့ကိုယ်ကျိုးအဖို့ အလို့ငှါ ရှာဖွေကြသည်။ “အဓမ္မ၏သားဖြစ်ကြသည်၊ ဘုရားကိုမသိ ကြပေ”။ အသွေးအသားဇာတိ လူသားသည် မိမိတို့ကိုယ်ကျိုးအဖို့အလို့ငှါ ရှာဖွေ ကြသည်။ ကာမဂုဏ်ခံ စားမှုအကြောင်းကို သာရှာဖွေကြသည် (၁ရာ၂း၂၂)။ မိမိတို့အတွေးထဲ၌ ဘုရား သခင်အဖို့နေရာမပေးခဲ့ ကြချေ။ ဖခင်ဧလိက မိမိ၏သားတို့ကို ပြုပြင်ဆိုဆုံးမသောအခါ၊”သူတို့သည် အဘ၏စကားကိုနားမထောင်ကြ။ အကြောင်းမူကား၊ ထာ၀ရဘုရားသည် ကွပ်မျက်ခြင်းငှါ အလိုရှိ တော်မူ၏ (၁ရာ၂း၂၅) ဟူ၍ ဖေါ်ပြထားပါသည်။ ဘုရားရှင်က နောင်တရရှိဖို့အချိန်များစွာ ပေးအပ်ခဲ့ သော်လည်း အခုတွင်ဘုရားသခင်သည် သူတို့အား လက်မြောက်အရှုံးပေးခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
“ထိုသူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို မသိမမှတ်လိုသည်ဖြစ်၍၊ မလျှောက်ပတ်သောအမှုကိုပြု စေမည်အကြောင်း၊ ၏ဘုရားသခင်သည် သူတို့ကို မောဟလက်သို့ အပ်လိုက်တော်မူသည် နှင့်အညီ” (ရောမ ၁း၂၈)။
သင်သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ငြင်းပယ်၍ ကြာရှည်စွာ အသက်ရှင်နိုင်ပါသည်။ ဘုရား သခင် မိန့်တော်မူသည်ကား “ငါ့ဝိညာဉ်သည် လူတို့တွင်အစဉ်မဆုံးမရ။ (ကမ္ဘာ၆း၃)၌ ဖေါ်ပြ ထားပါသည်။ သင့်အဖို့ ဘုရားသခင်လက်မြှောက် အရှုံးပေးသော အချိန်ကာလရောက်လို့ လာပါလိမ် မည်။ ထိုအခါ သင်သည် တရားဒေသနာတော်ကို နားထောင်လိုတော့မည်မဟုတ်တော့ချေ။ “သူတို့ သည် အဘ၏စကားကိုနားမထောင်ကြ။ အကြောင်းမူကား ထာ၀ရဘုရားသည် ကွပ်မျက်ခြင်းငှါ အလို ရှိတော်မူ၏”။
အသင်းတော်မိသားစုမှ ပေါက်ဖွါးလာသော “အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းမရှိသော” လူငယ်များအ ကြောင်းဝေငှာလိုပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်ဟောကြားမည့် တရားဒေသနာတော်သည် ယနေ့တက်ရောက်လာကြ သောလူငယ်များအတွက် အဓိပ္ပါယ်ရှိစေပါမည်၊ သို့သော် ဤအသင်းတော်၌ရှိ လူငယ်များကတော့ တော်ကြပေတယ်၊ ကျွန်ုတော်မြင်တွေ့ခဲ့သော ကလေးများဓါတ်ပုံနှင့်လည်း မတူကြပေဘူး။ အချို့လူကလေးများသည် အသင်းတော်မိသားစုအားဖြင့် မွေးဖွါးကြီးပြင်းလာကြတာဖြစ်သည်။ အချို့ကျတော့ အပြင်ဘက်ကဘုရားကျောင်းကို တက်ရောက်လာကြသူတွေပါ။ သို့သော် အပြင်ဘက် ကလာသောလူငယ် ကလေးတွေလည်း အသင်းမိသားစုကလေးတွေပါပဲ၊ အရေးကြီးသည်မှာ သင်သည် မည်သူ၏ မိတ္တူဖြစ်သလဲ! စကော့ဖီးလ်ကျမ်းစာအုပ်ကို ကိုင်ဆောင်လာပြီး ဘုရားကျောင်း တက်တာမျှဖြင့် သင့်အသက် တာမလုံလောက်သေးပါဘူး။ ဘုရားသခင်ကို မသိသေးသော လူငယ် ကလေးများမပေါင်းဖော်ပဲ၊ အဝေးရှောင်ဖို့လိုပါတယ်။ “ထိုသူတို့အထဲကထွက်၍ အသီးအခြား နေကြလော့”ဟု ထာ၀ရဘုရားမိန့်တော်မူသည် (၂ကော ၆း၁၇)။ ရှာမွေလသည် ဟုတ်ပနီနှင့်ဖိုင် ဟုတ်တို့နှင့်တဲတော်၌ ရှိနေခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ရှာမွေလသည် ထိုသူတို့နှင့်ရောနှောပြီးမနေထိုင်ခဲ့ပါ၊ တဲတော်၌ အတူရှိနေခဲ့ကြသော်လည်းထိုသူတို့နှင့် အတူစကားပြောဆိုနေ ကြသည်ဟူ၍ မှတ်တမ်းတင် ထားခြင်းမရှိပါ! အကယ်၍ စကားပြောခဲမယ်ဆိုသော်လည်း လိုရင်းတို ရှင်းပဲ ပြောခဲ့မည်ဖြစ်သည်။ လောကီဆန်သော အသင်းတော်ကလေးများကို ရှောင်ရှားကြပါ! “ထာ၀ရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား ထိုသူတို့အထဲကထွက်၍ အသီးအခြားနေကြလော့”။
အသက်တာမပြောင်းလဲသေးသော အသင်းတော်ရှိ လူငယ်ကလေးများအား ပြောလိုပါတယ်၊ သင့်အတွေးထဲ ဘုရားရှင်အဖို့ နေရာပြင်ဆင်ထားပါသလား? သင့်တစ်ကိုယ်တည်း အထီးကျန်သော အခါ၊ ဘုရားသခင်အကြောင်း စဉ်းစားခဲ့ဖူးပါသလား? သင်တစ်ယောက်တည်း တွေ့ကြုံရမည့်အရာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သတိရပါ။ သင်ဘုရားကျောင်းကို တက်ရောက်စဉ် ဘုရားရှင်ကို စကားပြောပါ၊ သင်တစ်ကိုယ်တည်း အထီးကျန်နေချိန် ဘုရားရှင်ကို အပူတပြင်းစကား ပြောခဲ့ဖူးပါသလား? သင်တစ်ကိုယ်တည်း အထီးကျန်နေချိန်တွင် သင်သည် အပြစ်ကျူးလွန်သူဖြစ်သဖြင့် သင့်အပြစ် များကို ဘုရားရှင်သိနေသည်ဟု ခံစားပါသလား? ဘုရားရှင်ကို ဘယ်တော့အခါမှ မစဉ်းစားမ ဆင်ခြင်ခဲ့သော ဟုတ်ပနီနှင့် ဖိုင်ဟတ်ကဲ့သို သင်ဖြစ်နေပါသလား?
ကနေ့ညနေ အာဒိုနီယမ်ယုဒသန်သည် (၁၇၈၈-၁၈၀၅) ဗမာပြည်သို့ သာသနာပြုစတင်ခဲ့သူအ ကြောင်းနှင့်ပါတ်သတ်၍ သက်သေခံဝေငှပါမည်၊ (ဤနေရာတွင် ၎င်းတရားဒေသနာကို ဖတ်ရှုရန်ဝင် ဖတ်ပါ)။ သူ့ဖခင်သည် အမှုတော်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ သူသည်အသင်းတော်၏ မိသားစု၌ကြီး ပြင်းသူဖြစ်သည်။ သို့တိုင်အောင် ဘုရားရှင်ကို ကကနနခွဲခြမ်းမသိရှိခဲ့ချေ။ သူတွေးပြီးသိသော အရာ သည် ဘုရားရှင်သည် ကျွန်ုပ်အဖေ၏ ဘုရားသာဖြစ်သည်ဟု သာသိရှိသည်။ မိမိမိသားစုနှင့်ဝေးသော နေရာ၊ တညသောညဉ့်နက် သန်းခေါင်းယံအချိန်၌သာ ဘုရားရှင်ကို အမှန်တကယ်သိနားလည်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ယာကုပ်ပမာအဝေးရောက်မှ ဘုရားရှင်ကို သိလာသူဖြစ်သည် “အကယ်စင်စစ်ထာ၀ရဘု ရားသည် ဤအရပ်၌ရှိတော်မူကြောင်းကို ငါမသိ။ ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ ရောက်လေ၏ (ကမ္ဘာဦး ၂၈း ၁၆- ၁၇ ) ဟုဖော်ပြထားပါသည်။
ကျွန်ုပ်အသက်၁၅နှစ်တွင် ကျွန်ုပ်အဖွား၏သင်္ချိုင်းဂူကို ဖွင့်ကြည့်သောအခါ ကျွန်ုပ်သည်ကြောက် လန့်၍ တောင်ကုန်းပေါ်သို့ ပြေးခဲ့၏။ အသက်ရှုမ၀၊ ချွေးများထွက်လျှက် ငိုယိုခဲ့ဖူးပါသည်။ ထိုစဉ်တွင် ဘုရားရှင်သည် ဆင်းသက်လာပြီး ထိုအရပ်၌ ကြောက်လန့်ဖွယ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ယာကုပ် ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်လည်း “အကယ်စင်စစ်ထာ၀ရဘုရားသည် ဤအရပ်၌ ရှိတော်မူ၏၊ ရှိတော်မူကြောင်းကို ငါမသိ။ ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်” ထို့နောက်အသက်တာ မပြောင်းလဲသေးပါဘူး၊ သို့သော် ယာကုပ်၏ဘုရားရှိကြောင်းကို သတိရလာခဲ့သည်။ သင်တစ်ကိုယ်တည်း အထီးကျန်နေချိန်တွင် ယာကုပ်၏ဘုရားသခင်သည် ကြောက်ရွံ့ဖွယ်ဖြစ်သည်ဟူ၍တွေးခဲ့ဖူးပါသလား? သင်တစ်ကိုယ်တည်း အထီးကျန်နေချိန်တွင် ယာကုပ်မြင်တွေ့ခဲ့သော ထာ၀ရဘုရားက သင်၏အပြစ်များကို သိနေသည်ကို သင်ခံစားခဲဖူးပါသလား? ဘုရားရှင်နှင့်ကြောက်လန့်ဖွယ် တွေ့ဆုံမှုမရှိုဘဲ သင့်အသက်တာမည်ကဲ့သို့ ပြောင်းလဲလာမည်နည်း?သမ္မာကျမ်းစာမိန့်တော်မူသည်ကား “ဘုရာသခင်အထံတော်သို့ ချဉ်းကပ် သောသူသည် ဘုရားသခင်ရှိတော် မူကြောင်းကို၎င်း ယုံကြည်ရမည်” (ဟေဗြဲ ၁၁း၆) ကျွန်ုပ်သည် သဘောကောင်းသော ၌ရှိ ဘုရားအကြောင်းပြောမှာမဟုတ်ဘူး အို! “ငါတို့ဘုရားသခင်သည် လောင်သောမီးဖြစ်တော်မူ၏” (ဟေဗြဲ ၁၂း၂၉)။ မောရှေကဲ့သို့ “အာဗြဟံ၏ ဘုရား၊ ယာကုပ်၏ဘုရား၊ ဣဇက်၏ဘုရား” ဟူ၍ နားလည်သဘောပေါက်ရပါမည်။ မောရှေသည် ဘုရားသခင်ကို မကြည့်ဝံ့၊ မိမိမျက်နှာကို ဖုံးလျှက်နေ၏ (ထွက် ၃း၆)။ သင်တစ်ကိုယ်တည်းအထီး ကျန်နေချိန် သင့်အတွေးထဲ ဘုရားရှင်ကိုအမှန်တကယ်သိရှိရပါမည်။ ကြောက်ရွံ့ပြီး သင့်အပြစ်ကို သင်နားလည်ဖို့လိုပါသည်။
လုသာ ပြောကြားသကဲ့သို့ –
အကယ်၍ သင်သည် အသစ်သောအသက်တာ၌ ပြောင်းလဲသောသူဖြစ်ပါက ဘုရား ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့် သင့်အပြစ်ကိုသိပြီးနိုးကြားသော အသိရှိရပါမည် (What Luther Says, Concordia Publishing House, 1994 edition, p. 343; note on Psalm 51:13).
ထိုကဲ့သို့ ယုဒသန်သည်လည်း တစ်ကိုယ်တည်းအထီးကျန်သော ညဉ့်နက်သန်းခေါင်းယံ၌ ခံစားခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ညဉ့်နက်သန်းခေါင်အချိန်တွင် သေခြင်းခေါင်းတလား၌ အလောင်းကိုထည့်၍ သင်္ဂြိုလ်ခြင်း ထာ၀ရပျောက်လွင့်ခြင်းဟူသော ကြောက်လန့်ဖွယ်ကို စဉ်းစားအသိနိုးကြားခဲ့သည်။ သင့်အတွေးအ ပြင်ဘက်၌မဟုတ်ဘဲ အတွင်းနှလုံးထဲ တွေးခေါ်ကြည့်ပါ၊ နှလုံးသားထဲမှတ်ကျုံးထားပါ။ ဤကြောက် စရာအတွေးများက သင့်အား ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်ခြင်းကို ဖြစ်စေမည်။ ထိုကဲ့သို့ တွေးခေါ်ခြင်းနှင့် ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိသရွေ့သင်၌ ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိနိုင်၊ သခင့်အသွေးတော်အားဖြင့် သင့်အပြစ်ဆေး ကြောသန့်စင်ဖို့ သင်လိုလားမည်မဟုတ်ပေ!
ဟုတ်ပနီနှင့်ဖိုင်ဟတ်တို့ နှစ်ယောက်သည် ထိုကဲ့သို့ဘာမှ မစဉ်းစားခဲ့ကြပေ။ “သူတို့သည် အဓမ္မ ၏ သားများဖြစ်ကြပြီး ဘုရားရှင်ကို မသိလိုကြပါ” “သူတို့သည် အဘ၏စကားကို နားမထောင်ကြ အကြောင်းမူကား ထာ၀ရဘုရားသည် ကွက်မျက်ခြင်းငှါ အလိုရှိတော်မူ၏”
ရှာမွေလနှင့် အင်မတန်ခြားနားနေပေမည်! ရှာမွေလသည် “အသင်းတော်မိသားထဲက ပေါက်ဖွား လာသည်မဟုတ်ပါ” သူ့မိခင်ကသားအား ဧလိနှင့်အတူတဲတော်၌ အပ်ထားသောသူသာလျှင် ဖြစ် သည်။ မိသားစုနှင့်ဝေးကွာ၍ “အထီးကျန်သော လူငယ်လေးဖြစ်သည်၊ ညဉ့်နက်သန်းခေါင်ယံ၌ ထာ၀ရ ဘုရားကခေါ်သော လူငယ်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်”
“တရံရောအခါ ဧလိသည်မိမိနေရာ၌ အိပ်လျှက်သူ၏ မျက်စိမှုန်သောကြောင့် မဖြစ် နိုင်သည့်ကာလထာ၀ရဘုရား၏ သေတ္တာတော်ရှိရာ ထာ၀ရဘုရားအိမ်တော်၌ မီးခွက် မသေမှီ၊ ရှာမွေလသည်လည်း၊ အိပ်လျှက်ရှိသောအခါ ထာ၀ရဘုရားသည် ရှာမွေလ ကို ခေါ်တော်မူ၍ ရှာမွေလက အကျွန်ုပ်ရှိပါသည်ဟု ထူးသဖြင့်၊ (၁ရာ ၃း၂-၄)။
တဲတော်၌ ညအမှောင်ထဲ ကျရောက်လို့လာပါပြီ။ မီးတိုင်အလင်းသည်လည်း မှိတ်လိုက်၊ တောက် လိုက်ဖြစ်နေ၏၊ ဘုရားရှင်သည် သူ့ကုတင်ပေါ်၌ အိပ်နေသောရှာမွေလကို ခေါ်လေသည်။ ခရစ်တော် ဘုရားရှင်၏ လူ့ဇာတိခံယူပြီး ဤလောကထဲသို့ ကြွလာခြင်းပုံရိပ်ဖြစ်သည်။ “ကြွလာခြင်း၊ မတ်တပ် ရပ်နေခြင်းနှင့် ခေါ်ထုတ်ခြင်း” (၁ရာ ၃း၁၀)၌ တွေ့ရပါသည်။ ရှာမွေလသည် အသက်တာပြောင်းလဲ ပြီးနောက်တွင် သူသည် “ထာ၀ရဘုရားသည် ရှိလောမြို့၌ အထက်ထက် ထင်ရှားတော်မူ၍” (၁ရာ၃း၂၁)ဟု ဘုရားရှင်ကို တွေ့ခဲ့သည်။ ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဂရိဖက်စ် သီဆိုခဲ့သော ဓမ္မ သီချင်း နားထောင်ကြပါစို့၊
(၁၈၆၈-၁၉၂၇ အီးမေရီဂရီးမ်သီကုံးသော “စကားပြောတော်မူပါ”
ဓမ္မသီချင်းကို သင်းအုပ်ဆရာမှ သံစဉ်ထည့်ထားပါသည်။)
အို! လူငယ်မောင်မယ်များ ဘုရားသခင်သည် အကယ်စင်စစ်ရှိတော်မူ၏! အဓမ္မ၏သားသမီးများ မဖြစ်ကြဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးနေလျှက်ပါ! ယာကုပ်နှင့်ယုဒသန် ညဉ့်နက်သန်းခေါင်းယံ၌ “ကြောက်လန့်ဖွယ်” ဖြစ်ရပ်ကြုံတွေ့သလို သင်တို့တွေ့ကြုံပြီး အသက်တာပြောင်းလဲဖို့ ဆုတောင်းပေး နေပါသည်။ သင့်အပြစ်နှင့်သေခြင်းကို သေချာစွာစမ်းစစ်ပြီး ယာကုပ်နှင့်ယုဒသန်ကဲ့သို့ ကြောက် လန့်ခြင်းနှင့်အသက်တာပြောင်းလဲလာဖို့ ဆုတောင်းပေးနေပါသည်! သင်သည်သင့်အပြစ်အတွက် တရားစီရင်ခြင်းကို ခံရမည်ဖြစ်၍ ထိုအမှန်တကယ်ရှိနေသော တရားစီရင်ခြင်းကိုသိ၍ “ကြောက်ရွံ့ သောညဉ့်နက်” တွေ့ကြုံဖို့ဆုတောင်းပေးနေပါသည်! သင့်အတွေးခေါ် အမှားများကို ဖယ်ရှားပစ်ပြီး ခရစ်တော်ယေရှုနှင့် တွေ့ဆုံကာ ထိုသခင်၏အသွေးတော်အားဖြင့် သင်အပြစ်ဆေးကြောနိုင်ရန် ဆုတောင်းပေးနေပါသည်! ဤသီချင်းရေးသားပြထားသော စာသားများကဲ့သို့ သင်ဆိုနိုင်ပါမည် အကြောင်း ဆုတောင်းပေးပါသည်။
-ဒေသနာတော် မတိုင်ခင်ဒေါက်တာဂရိတန် အာယ်လ်ချန်မှ ၁ရာ ၃း၁-၁၀ ကိုဖတ်ကြားပေးသည်။
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျင်မင်ခင်ကိတ်ဂရိဖက်စ်မှ (၁၈၆၈-၁၉၂၇ အီးမေရီဂရီးမ်သီကုံး သော”စကားပြောတော်မူပါသခင်” ဟူသောဓမ္မသီချင်းကိုသီဆိုပေးသည်။